Heung-min သားတော်ကိုကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
ပင်မစာမျက်နှာ အာရှဘောလုံးပြိုင်ပွဲ Son Heung-min ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်နိုင်သောအတ္ထုပ္ပတ္တိများ
Son Heung-min ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်နိုင်သောအတ္ထုပ္ပတ္တိများ
နောက်ဆုံးပေါ်နောက်ဆုံးရေးသားချိန် ဇြန္လ 15, 2020
ဤမှတ်တမ်းသည် Son Heung-min ၏မိသားစုဘဝ၊ ကလေးဘဝအကြောင်း၊ အစောပိုင်းဘဝ၊ အတ္ထုပ္ပတ္တိများ၊ ရည်းစားအဖြစ်မှန်၊ ဘဝပုံစံ၊ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာဘဝနှင့်သူ၏ကလေးဘဝ မှစ၍ သူကျော်ကြားလာချိန်အထိအခြားအရေးပါသောဖြစ်ရပ်များကိုအပြည့်အဝဖော်ပြသည်။
Son Heung-min ၏ဘဝနှင့်တိုးတက်မှု။ Instagram: Instagram ။
ဟုတ်ပါတယ်, ပရိတ်သတ်တွေဟာ Winger ရဲ့ဘက်စုံသုံးမှုနဲ့ခြေထောက်နှစ်ဖက်စလုံးကိုကောင်းမွန်စွာအသုံးပြုနိုင်စွမ်းကိုသိပါတယ်. သို့သော် Son Heung-min ၏အတ္ထုပ္ပတ္တိကိုလူအများစုကသာဖတ်ရှုကြပြီး၎င်းသည်သူ့အကြောင်းကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံဖော်ပြသည်။ နောက်ထပ် ado မပါဘဲ, ရဲ့စတင်ကြကုန်အံ့။
Son Heung-min ၏ကလေးဘဝပုံပြင်:
ချွတ်စတင်ကာ သားတော်သည် Heung-min တောင်ကိုရီးယားရှိ Gangwon ၏မြို့တော် Chuncheon တွင် ၁၉၉၂၊ ဇူလိုင် ၈ ရက်တွင်မွေးဖွားခဲ့သည်။ သူသည်သူ၏မိခင် Eun Ja Kil နှင့်သူ၏ဖခင် Son Woong-Jung တို့မှမွေးဖွားသည့်ကလေးနှစ်ယောက်အနက်ဒုတိယဖြစ်သည်။
Son Heung-min ၏အစောဆုံးကလေးဘဝဓာတ်ပုံများအနက်မှတစ်ခုဖြစ်သည်။ 📷: LB.
သားငယ်လေးသည် Chuncheon ရှိသူ၏မွေးရပ်မြေတွင်ကြီးပြင်းလာခဲ့သည်။ မြို့တော်၌သူသည်သူ၏တစ် ဦး တည်းသောညီနှင့်ညီဖြစ်သူ Heung-Yun Son နှင့်အတူအားကစားကလေးဘဝနှင့်အကျိုးဖြစ်ထွန်းသောဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ရှိခဲ့သည်။
Chuncheon မှာကြီးပြင်းလာတဲ့လူငယ်လေးဟာလမ်းလျှောက်တတ်လာတာနဲ့အမျှဘောလုံးကစားတော့တာပဲ။ အားကစားမှကျေးဇူးတင်စွာဖြင့်သားဖြစ်သူသည်ကွန်ပျူတာဂိမ်းကစားခြင်းနှင့်ကစားစရာကစားစရာများကစားခြင်းတွင်စိတ်ဝင်စားမှုမရှိခဲ့ပါ။
ဘောလုံးကွင်းရှိကလေးဘ ၀ ၏တစ်ချိန်ချိန်တွင်သူ့အဖေ Son Woong-Jung ကသူသည်ဘောလုံးလောကတွင်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုရန်အတွက်တကယ်ကိုရည်ရွယ်ထားခြင်းရှိ၊ မရှိမေးမြန်းခဲ့သည်။ သား၏အဖြေမှာ“ ဟုတ်ကဲ့” ဖြစ်ပြီးဖခင်ဖြစ်သူကသူ့ကိုလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးခဲ့သည်။ ကလေးငယ်ကိုလေ့ကျင့်ပေးခြင်းသည် Son Woong-Jung အတွက်မခက်ခဲပါ။ ၎င်းသည်သူသည်တစ်ချိန်ကပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဘောလုံးသမားတစ် ဦး ဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်သူသည်အစ်ကိုနှင့်အတူသားကိုလေ့ကျင့်ပေးရာ၌သူ၏ယခင်အတွေ့အကြုံများကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ သားရဲ့အမေကပင်ပန်းတဲ့လေ့ကျင့်မှုတစ်ခုပြီးတိုင်းကလေးတွေကိုကြည့်ရှုစောင့်ရှောက်ရတာကို ၀ မ်းသာပါတယ်။
Son Heung-min အတွက်အလုပ်အကိုင်ဘောလုံးကစားနည်း
ပင်ပန်းနွမ်းနယ်နေသောလေ့ကျင့်ရေးသင်တန်းများအကြောင်းပြောပါရစေ၊ သားဖြစ်သူနှင့်သူ့အစ်ကိုသည်ဘောလုံး၏အခြေခံများကိုလေ့ကျင့်ရန်ရက်သတ္တပတ်၏ ၆ နာရီထက်နည်းသောအချိန်၌လုံ့လဝီရိယစိုက်ထုတ်ထားကြောင်းသင်သိပါသလား။ ထို့အပြင်လူငယ်များအား ၄ နာရီကြာအဝေးထိန်း Keepy Uppies (Juggling ဟုလည်းခေါ်သည်) ကိုပေးခဲ့သည်။ အမှန်မှာ၊ သူတို့သည် ၃ နာရီခန့်ကြာပြီးနောက်ပင်ပန်းနွမ်းနယ်နေသောသွေးနီမျက်လုံးများမှတဆင့်ဘောလုံး ၃ လုံးကိုမကြာခဏတွေ့မြင်ခဲ့ရသည်။
Son Heung-min နှင့်သူ၏အစ်ကိုများသည်တင်းကျပ်သောလေးနာရီကြာစောင့်ရှောက်သော 'Keepy Uppies' ကိုကလေးများအဖြစ်ဖြတ်သန်းခဲ့ကြသည်။ BBC ဘီဘီစီ။
Son Heung-min ၏ပြိုင်ဆိုင်မှုဆိုင်ရာဘောလုံးပြိုင်ပွဲ၏အစောပိုင်းနှစ်များ -
သားဖြစ်သူ ၁၄ နှစ်အရွယ်တွင်သူ့ဖခင်ကပွဲများစတင်ကစားခွင့်ကိုပေးခဲ့သည်။ တစ်နည်းပြောရရင်သားဖြစ်သူက ၁၄ နှစ်မပြည့်မချင်းယှဉ်ပြိုင်နိုင်တဲ့ဂိမ်းတွေကိုကစားခွင့်မရခဲ့ပါဘူး။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့အဖေကဒီလှုပ်ရှားမှုကအားကစားသမားလူငယ်တွေရဲ့ကြွက်သားတွေကိုအလွန်အကျွံအလုပ်လုပ်ခြင်းအားဖြင့်အလားအလာကိုပျက်စီးစေတယ်လို့ယုံကြည်ခဲ့တယ်။
သူသည်ပြိုင်ဘက်ဂိမ်းများကိုစတင်ကစားသည့်အချိန်တွင် ၁၄ နှစ်သာရှိသေးသည်။ Instagram: Instagram ။
မြန်ဆန်သောသင်ယူသူဖြစ်ခြင်းကြောင့်ကျေးဇူးတင်ပါသည် - ဘောလုံးအခြေခံအုတ်မြစ်ကောင်းရှိခြင်းအပြင်၊ Hamburger SV လူငယ်လူငယ်အကယ်ဒမီ၏လူငယ်စနစ်များတွင် ၂၀၀၉ နို ၀ င်ဘာလတွင်ဂျာမနီသို့ဝင်ရောက်ပြီးနောက်တွင်ပြproblemsနာမရှိပါ။
Son Heung-min ၏အတ္ထုပ္ပတ္တိ - လမ်းပေါ်သို့သွားရန်ပုံပြင်:
အထူးသဖြင့် Hamburger SV သည် ၂၀၁၀ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လမွေးနေ့တွင်သူ့အားပထမဆုံးပရော်ဖက်ရှင်နယ်စာချုပ်ချုပ်ဆိုပြီးနောက်တွင်သား၏အသက်မွေး ၀ မ်းကျောင်းမှုသည်တိုးတက်မှုများနှင့်တိုးတက်မှုများကိုမှတ်တမ်းတင်ခဲ့သည်။ ရည်မှန်းချက်ကြီးသည့်လူကလေးသည် Bayer သို့စံချိန်တင်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းမပြုမီနောက်ထပ်နှစ်နှစ် ဆက်၍ နေခဲ့သည်။ Leverkusen သည် ၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင်ဖြစ်သည်။ Son သည်ကလပ်တွင် ၂ နှစ်အတွင်းမျက်စိကျစရာအမှတ်များကျန်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည် Tottenham Hotspur အပါအ ၀ င်ကလပ်အသင်းများထံမှစိတ်ဝင်စားမှုများရရှိခဲ့ပြီးသူသည်သားဖြစ်သူကိုလက်မှတ်ထိုးခဲ့သည်။
သူသည် Bayer Leverkusen တွင်သားတစ်ယောက်ဖြစ်သည်။ Give: GiveMeSports ။
Son Heung-min ၏အတ္ထုပ္ပတ္တိ - Rise To Fame Story:
၂၀၁၅ ခုနှစ်စက်တင်ဘာလတွင် Son သည်ကောင်းသောအဖြူရောင် Hart Hart လမ်းဟောင်းကိုခြေကျင်လျှောက်လိုက်သောအခါသူ၌ကျော်ကြားမှုတစ်ခုသာရှိသည်။ ၎င်းသည်ထိုအချိန်ကဘောလုံးသမိုင်းတွင်အမြင့်ဆုံးအာရှကစားသမားဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။
ပရိတ်သတ်တွေမျှော်လင့်ချက်နဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးရည်မှန်းချက်တွေကိုစီးပြီး ၀ င်းဂါးကသူဟာအင်္ဂလိပ်နှစ်ခြမ်းအတွက်သူ့ရဲ့ပထမဆုံးရာသီ ၂ ပွဲမှာကောင်းမွန်တဲ့အထင်အမြင်ကိုရရှိစေခဲ့ပါတယ်။ Son သည်သူ၏တတိယရာသီတွင်ပရီးမီးယားလိဂ်သမိုင်းတွင်ထိပ်တန်းအာရှဂိုးသွင်းသူဖြစ်လာခဲ့သည်။ သိပ်မကြာခင်မှာပဲသူဟာစတုတ္ထရာသီမှာချန်ပီယံလိဂ်သမိုင်းမှာအအောင်မြင်ဆုံးအာရှကစားသမားဖြစ်လာခဲ့သည်။
ဒီဆန်နီ၏အတ္ထုပ္ပတ္တိရေးသည့်အချိန်တွင်သူသည် Tottenham ၏တန်ဖိုးရှိသောပိုင်ဆိုင်မှုများအပြင်ဥရောပတွင်ကစားခဲ့သည့်တောင်ကိုရီးယား၏အမြင့်ဆုံးအဖြစ်ရှုမြင်ခံရသည်။ သူ့အတွက်မည်သည့်နည်းလမ်းကမောက်ကမဖြစ်စေသည်ဖြစ်စေကြွင်းသောအရာများသည်သူတို့ပြောသကဲ့သို့အမြဲတမ်းသမိုင်းဖြစ်လိမ့်မည်။
သူကအကြားအဆင့် အကောင်းဆုံးအာရှကစားသမားများ အဘယ်သူသည်ဥရောပ၌ဂိမ်းကစားကြပြီ။ 📷ပန်းတိုင်။
Son Heung-min ၏ရည်းစားများအကြောင်း:
LB အား ၂၀၂၀ မေလမေလအထိရရှိနိုင်သောမှတ်တမ်းများအရသားသည်စာရေးချိန်တွင်တစ်ကိုယ်ရေဖြစ်သော်လည်းသူ၏ချိန်းတွေ့မှုသမိုင်းတွင်အမျိုးသမီးနှစ် ဦး ရှိသည်။ ၎င်းတို့တွင်ကိုရီးယားပေါ့ပ်ကြယ်ပွင့်များဖြစ်သော Bang Min-ah နှင့် Yoo So-young တို့ပါဝင်သည်။ Winger နှင့် Bang Min-ah တို့သည်သမိုင်းကြောင်းသေချာသည်ဖြစ်သော်လည်း Yoo So-young နှင့်သူ၏ဆက်ဆံရေးကိုထပ်တူမပြောနိုင်ပါ၊
Son Heung-min ၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာဘဝကိုပြောင်းလဲစေသောအမျိုးသမီးများ။ Bang Min-ah (ဘယ်ဘက်ထိပ်) နှင့် Yoo So-young (အောက်ခြေညာ) W WTFoot ။
ထိုထက်ကားသားသည်ဇနီးဖြစ်သူအားသူသိသော (သို့) မသိသောချစ်ခြင်းမေတ္တာများထဲမှဇနီးတစ် ဦး ကိုမထုတ်ပေးမီအချိန်အတန်ကြာသည်။ တစ်ချိန်ကသားဖြစ်သူကသူ၏ဘောလုံးအိပ်မက်များကိုအကောင်အထည်ဖော်ရန်သူ၏ဖခင်၏အကြံဥာဏ်ကိုလိုက်နာနေသည်ဟုတစ်ကြိမ်ဖော်ပြခဲ့သည် သား၏အဆိုအရသူ၏အဖေသည်သူ၏အလုပ်အကိုင်ကိုလုံးလုံးလျားလျားအာရုံစိုက်ရန်နှင့်ဇနီးသို့မဟုတ်ကလေးတွေမမွေးရန်အကြံဥာဏ်ပေးခဲ့သည်၊
Son Heung-min ၏မိသားစုဘဝ
Son Heung-min ငယ်စဉ်ကလေးဘဝပုံပြင်သည်မျှော်လင့်ချက်ရှိသောဘောလုံးသမားများအတွက်အမြဲတမ်းအလွန်စိတ်အားတက်ကြွဖွယ်ဖြစ်ခဲ့ပြီး၎င်းအားသူ့မိသားစုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ သားဖြစ်သူ Son Heung-min ၏မိသားစုဝင်များနှင့် ပတ်သက်၍ သူ၏မိဘများမှအစပြုထားသည့်အချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့ထံတင်ပြပါမည်။
Son Heung-min ၏ဖခင်အကြောင်း
Son Woong-Jung သည်ဖခင်ဖြစ်ပြီးဘောလုံးပါရမီ၏သူငယ်ချင်းဖြစ်သည်။ သူသည် ၁၉၆၂ ခုနှစ်ဇွန်လ ၁၀ ရက်နေ့တွင်မွေးဖွားခဲ့သည်။ ၂ နှစ်၏ဖခင်သည်အသက် ၂၈ နှစ်အရွယ်တွင်ဒဏ်ရာကြောင့်ဒဏ်ရာပြတ်တောက်မှုမတိုင်မီတောင်ကိုရီးယား၌အသက်မွေး ၀ မ်းကျောင်းကစားခြင်းတွင်ထူးခြားသောအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုရှိခဲ့သည်။ ပြည်နယ်နှင့်အနီးဆုံးအနာဂတ်ကာလ၌စပါးဘောလုံးကလပ်နည်းပြဝန်ထမ်းများနှင့်ပူးပေါင်းရန်လိုအပ်သည်။
Son Heung Min နှင့်သူ၏ဖခင်နှင့်အတူ Instagram: Instagram ။
Son Heung-min ၏မိခင်အကြောင်း
Eun Ja Kil သည်သားဖြစ်သူ၏လှပသောအသွင်အပြင်၏ ၇၅% ကိုသားမှရရှိခဲ့သည်။ ကူညီပံ့ပိုးပေးတဲ့အမေလိုပဲ Eun Ja Kil ဟာသူမကလေးတွေကိုအမြဲတမ်းနေခဲ့တယ်။ သူမသည်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဘောလုံးကစားခြင်းတွင်မည်မျှအထိပါ ၀ င်ခဲ့သည်ကို ၀ မ်းသာဂုဏ်ယူသည်။
သားဖြစ်သူ Heung-min ကသူ့အမေနှင့် Instagram: Instagram ။
Son Heung-min ၏မွေးချင်းအကြောင်း:
သားမှာညီမလေးတွေမရှိပေမယ့်ဟောင်ဂျွန်းသားအမည်ရှိအစ်ကိုကြီး။ Son ကဲ့သို့ပင် Heung-Yun သည်ပြိုင်ဘက်ဂိမ်းများကိုမကစားခင်သူ၏ဖခင်၏ထိန်းကျောင်းမှုအောက်တွင်ဘောလုံးအခြေခံကိုတည်ဆောက်ခြင်းတွင်ကြီးမားသောအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုရှိသည်။ သူဟာဂျာမနီမှာနောက်ဆုံးကစားခဲ့တဲ့ SV Halstenbek ကို ၂၀၁၃ ခုနှစ်မှာနောက်ဆုံးလူသိများခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးသူ့ရဲ့ဘောလုံးလောကမှာထင်ရှားကျော်ကြားမှုသိပ်မရှိလှတဲ့အကြောင်းကိုသိပ်မသိရပါဘူး။
Son Heung-min ကသူ့အစ်ကိုနှင့်အတူ Instagram: Instagram ။
Son Heung-min ၏ဆွေမျိုးများအကြောင်း:
Son Heung-min ၏မျိုးရိုးစဉ်ဆက်နှင့်မိသားစုအရင်းအမြစ်များကိုလေ့လာခြင်းအားဖြင့်အဘိုးအဘွား၏မှတ်တမ်းများမရှိပါ။ ထိုနည်းတူစွာပင်သူ၏လူမျိုးစုအသေးစိတ်အချက်အလက်များမှာအလွန်ပင်သွင်ပြင်လက္ခဏာရှိသည်။ ထို့အပြင်တောင်ပံကစားသမား၏ ဦး လေး၊ အဒေါ်နှင့်ဝမ်းကွဲများကိုသူမနှင့်တူမများမဖော်ပြရသေးသော်လည်းမသိရသေးပါ။
Son Heung-min ၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာဘဝ
Son Heung-min မိသားစု၏အတိုက်အခံနှင့်အတိုက်အခံခုခံကာကွယ်မှုများကိုပြင်းထန်စွာညှဉ်းဆဲသည့်သူ၏ကွင်းဆင်းပုဂ္ဂိုလ်၊ Son ၏ပြင်ပပုဂ္ဂိုလ်နှင့် ပတ်သက်၍ သူ၏ထင်မြင်ချက်နှင့်အချက်အလက်များကသူ့ကိုဂရုစိုက်တတ်သော၊ ခံနိုင်ရည်ရှိခြင်း၊ ရည်မှန်းချက်ကြီးခြင်း၊ Zodiac သင်္ကေတသည်ကင်ဆာဖြစ်သည့်စွယ်စုံအ ၀ တ်အစားသည်သူ၏စိတ်ဝင်စားမှုနှင့်ဝါသနာများဟုလူအများမှတ်ယူထားသောလှုပ်ရှားမှုများစွာကိုပုံမှန်ပြုလုပ်လေ့ရှိသည်။ ၎င်းတို့တွင်ခရီးသွားခြင်း၊ လေ့ကျင့်ခြင်း၊ ဗီဒီယိုဂိမ်းကစားခြင်း၊ ရုပ်ရှင်ကြည့်ခြင်းနှင့်သူ့မိသားစု၊ သူငယ်ချင်းများနှင့်အချိန်ဖြုန်းခြင်းတို့ပါဝင်သည်။
ဗီဒီယိုဂိမ်းကစားခြင်းသည်သူ၏ဝါသနာများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ Instagram: Instagram ။
Son Heung-min ဘဝပုံစံ:
Son Heung-min သည်သူ၏ငွေများကိုမည်သို့အသုံးပြုသည်နှင့် ပတ်သက်၍ သူသည် ၂၀၂၀ တွင်ဒေါ်လာ ၂၀ သန်းခန့်ရှိမည်ဟုသင်ထင်ပါသလား။ ယေဘူယျအားဖြင့်သား၏စည်းစိမ်အများစုသည်ပထမအသင်း၏ဘောလုံးကစားခြင်းအတွက်သူရရှိသောလစာ၊ သို့သော်သားတော်သည်ထောက်ခံချက်များမှသိသာထင်ရှားသည့်အမြတ်ငွေများရရှိသည်ကိုလူအများမသိကြပါ။ ထို့ကြောင့်သူသည်ကားများနှင့်အိမ်များကဲ့သို့ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုဝယ်ယူရန်သူ၌ငွေများစွာသုံးနိုင်သည်။ သားဖြစ်သူ Hampstead ရှိအိပ်ခန်းသုံးခန်းပါသောတိုက်ခန်းတွင်သူ၏မိဘများနှင့်အတူနေထိုင်ရန်ရွေးချယ်ခဲ့သော်လည်းတိုက်ခန်း၏ကားဂိုဒေါင်တွင်လန်ဒန်၏လမ်းများသို့သွားရန်သူအသုံးပြုသောထူးခြားဆန်းပြားသောစီးနင်းမှုများစွာရှိသည်ကိုလျစ်လျူရှုထားသည်။
အဆိုပါဘောလုံးပါရမီဖန်စီစီးနင်းစုဆောင်းမှုရှိပါတယ်။ Youtube Youtube ။
Son Heung-min ၏အချက်အလက်များ:
အဖြစ်မှန် # ၁- လစာပျက်ပြားခြင်း:
စပါးအသင်းနှင့်စာနီ၏စာချုပ်အရသူသည်တစ်ပတ်လျှင်ပေါင် ၁၄၀,၀၀၀ ၀ င်ငွေရရှိသည်။ အဲဒါကိုသေးငယ်တဲ့နံပါတ်များအဖြစ်ခွဲယူပြီး၊
TENURE / ဝင်ငွေရရှိမှု
တောင်ကိုရီးယား ၀ င်ငွေရရှိမှု (KRW)
တစ်နှစ်လျှင် £ 7,291,200 $8,825,049 € 8,155,032 ဝမ် 10,882,952,647
တစ်လလျှင် £ 607,600 $735,421 € 679,586 ဝမ် 906,912,720
တစ်ပတ်လျှင် £ 140,000 $169,452 € 156,587 ဝမ် 206,966,065
တစ်နေ့လျှင် £ 20,000 $24,207 € 22,370 ဝမ် 29,852,294
တစ်နာရီ £ 833 $1,009 € 932 ဝမ် 1,243,845
တစ်မိနစ်နှုန်း £ 13.8 $16.81 € 15.53 ဝမ် 20,731
တစ်စက္ကန့်လျှင် £ 0.23 $0.28 € 0.25 ဝမ် 346
ဤသည်ကားအဘယ်သို့ သားတော်သည် Heung-min သင်ဤစာမျက်နှာကိုစတင်ကြည့်ရှုစတင်ကတည်းကရရှိခဲ့ပါပြီ။
သင်သိပါသလား ... ပျမ်းမျှတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံသား ၀ င်ငွေ ၉,၈၀၀,၀၀၀ ၀ န်းကျင်ရှိတဲ့ ၀ န်ထမ်းတွေအတွက်အလုပ်လုပ်ဖို့လိုလိမ့်မယ် ခုနစ်နှစ် နှင့် ရှစ်လ တစ်လအတွင်း Son Heung-min ဝင်ငွေရရန်
အဖြစ်မှန် # ၁ - စစ်ဘက်ဆိုင်ရာကင်းလွတ်ခွင့်:
သားသည် ၂၀၁၁ ခုနှစ်အာရှအားကစားပွဲ၌ရွှေရရှိရန်တောင်ကိုရီးယားကို ဦး ဆောင်ခြင်းအားဖြင့် ၂၁ လတာ ၀ န်ထမ်းဆောင်ရန်စစ်မှုထမ်းခြင်းမှကင်းလွတ်ခွင့်ရခဲ့သည်။ မဖြစ်မနေအခြေခံလေးပတ်စစ်ရေးလေ့ကျင့်ရေး တိုတောင်းသောအခြေခံ ၀ န်ဆောင်မှုကိုလာမည့်နှစ်နှစ် ၀ န်ဆောင်မှုမှကင်းလွတ်ခွင့်ရနိုင်သောငယ်ရွယ်သောကိုရီးယားများအတွက်ရည်ရွယ်သည်။
Son Heung Min ၏စစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုပြီးဆုံးချိန်။ သူဟာဆုရသင်တန်းသားဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုငါတို့ပြောခဲ့သလား။ ဟုတ်တယ် The: TheSun ။
အဖြစ်မှန် # ၃ - သြဇာလွှမ်းမိုးမှု -
သား၏ထင်ပေါ်ကျော်ကြားမှုကိုမြှင့်တင်ခြင်းသည်ဥရောပဘောလုံးပြိုင်ပွဲတွင်ကျွမ်းကျင်စွာယှဉ်ပြိုင်ရန်တောင်ကိုရီးယားဘောလုံးစွမ်းရည်များပေါ်ထွက်လာစေရန်လှုံ့ဆော်ပေးခဲ့သည်။ သူတို့တွင်ထင်ရှားသည် Lee Kang-in သူသည်ဗလင်စီယာအတွက်ကွင်းလယ်လူအဖြစ်မိမိ၏ကုန်သွယ်ရေးကိုကြိုးပမ်းနေသည်။
အဖြစ်မှန်4- FIFA အဆင့်သတ်မှတ်ချက်
ဘောလုံးတွင်ကျွန်ုပ်တို့သိထားသည့်နာမည်ကြီးများမှာအလွန်ကောင်းသောအဆင့်သတ်မှတ်ချက်များရှိပြီး၎င်းတို့ကိုဘာကြောင့်ကြီးကြီးမားမားဟုရှုမြင်ကြသနည်း။ သားဖြစ်သူသည်သူ၏အလွန်ကောင်းမွန်သော FIFA အဆင့်သတ်မှတ်ချက် ၈၇ မှတ်ဖြင့်ချွင်းချက်မဟုတ်ပါ။ သို့သော်ပရိသတ်များကသူနှင့်အတူတက် level ကိုတစ် ဦး အပိုဆောင်းအချက်ကိုထိုက်သည်ဟုယုံကြည်ကြဘူး Raheem Sterling အဘယ်သူသည် 88 မှတ်၏ဝါကြွားတတ်။
အဆိုပါတောင်ပံကစားသမားရဲ့ခြုံငုံအဆင့်သတ်မှတ်ချက်တက်နှင့်မြင့်တက်နေသည် So SoFIFA ။
Son Heung-min အတ္ထုပ္ပတ္တိ - ဝီကီဒေတာ
နာမည်အပြည့်အစုံ သားတော်သည် Heung-min
မွေးရက် ဇူလိုင်လ 8 ၏ 1992th နေ့က
မွေးရပ်ဒေသ တောင်ကိုရီးယား Gangwon ရှိ Chuncheon ။
အသက်အရွယ် ၂၈ နှစ် (၂၀၂၀ မေလ ၁၅ ရက်နေ့အထိ)
မိဘများ အွန်ဂျာကီ (အမေ)၊ သားဝှွန်ဂျွန် (ဖခင်)
မောင်နှမ Heung-Yun Son (အစ်ကို)
မိန်းမကလေး Bang Min-ah Yoo So-young
Son Heung-min ၏အတ္ထုပ္ပတ္တိအကြောင်းဤတည်ဆောက်မှုဆိုင်ရာရေးနည်းကိုဖတ်ရှုခြင်းအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ Lifebogger တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်များနှင့်ကလေးဘဝဇာတ်လမ်းများကိုနေ့စဉ်ပို့ဆောင်ခြင်း၏တိကျမှန်ကန်မှုနှင့်မျှတမှုကိုသေချာစေရန်လိုသည်။ ဒီဆောင်းပါးမှာထူးဆန်းတဲ့အရာတစ်ခုကိုမင်းမြင်ဖူးလား။ ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ။ သို့မဟုတ်ပါကကျွန်ုပ်တို့၏ရေးပုံနှင့်တောင်ကိုရီးယားဘောလုံးသမားနှင့် ပတ်သက်၍ သင်ထင်သလောက်မှတ်ချက်ပေးရန်ခဏလောက်အချိန်ယူပါ။